SALAMO 74.1-23	F. 1, 2 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 74.1-23	F. 1, 2
Fitarainana lalina (1-11). Taorian’ny taona 587 talohan’i J.K. izay namaboan’ny Babyloniana an’i Jerosalema, ka nandravany ny Tempoly no azo inoana fa nanoratana ity Salamo ity. Mahonena ny mahita ny tanàna sy ny Tempoly rava, ary indrindra Andriamanitra izay nahafoy ny Tempoliny. Tao anatiny izany dia mitalaho ny mpanao Salamo ;
- nahoana no nanary anay sy tezitra aminay? (1)
- maninona no avela hanjakazaka ny fahavalo? (3b-8)
- tsy hita intsony ny mpaminany mpitondra ny hafatr’Andriamanitra (9)
- mandra-pahoviana no haniratsira sy hanamavo ny anaranao ny fahavalo? (10)
- nahoana Ianao no mitazam-potsiny? (11). Tena very fanantenana sy kivy ny olony! Mety hiharan-java-tsarotra toa izany koa isika mpino ka sady manontany ny anton’ny fahavoazana no miantso vonjy amin’Andriamanitra. Ho fizahan- toetra ny finoantsika? Sa famaizana noho ny fahotana natao? Handeha samy handinihan-tena ny zava-mitranga.
Fangataham-pamonjena ombam-panantenana (12-23). Tao anatin’ireo fahoriana ireo dia nihatsampy tamin’Andriamanitra ny mpanao Salamo, nitalaho : “tsarovy ny fiangonanao…aingao ny tongotrao” (2a,3b). Nahatoky an’Andriamanitra izy satria fantany tsara ny momba Azy :
Mpanao fahagagana sy Mpandresy ny fahavalo, Mpamorona (12-17).
Notanisainy avokoa ireo satria fantany fa tsy misy dikany ny herin’ny fahavalo ampitahaina amin’ny herin’Andriamanitra. Mitaona an’Andriamanitra izy hiditra an-tsehatra ka haneho ny maha-Tompo Azy. Miantsoantso izy: tsarovy (18), aza manadino, hevero (19,23), mitsangàna (22). Ho tahaka ny mpanao Salamo anie isika rehefa mandalo ady sarotra : “Miverena amiko, dia mba hiverina ho aminareo kosa Aho” (Malakia 3.7b). Amin’ny fomba ahoana? Amin’ny alalan’ny vavaka fibebahana.
Fanantenana : “Aty amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao.” (Jaona 16.33b)